D/Hoose ee Hargeysa oo lo’ ay kasoo ururiyeen suuqyada Magaalada ku wareejiyay Ciidanka Asluubta | Somaliland.Org
D/Hoose ee Hargeysa oo lo’ ay kasoo ururiyeen suuqyada Magaalada ku wareejiyay Ciidanka Asluubta
December 28, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Dawladda Hoose ee caasimadda Hargeysa, ayaa markii ugu horreysay la wareegtay Lo’ fool xumo weyn ku haysay bilicda magaalada, iyada oo hore dhawr jeer u digtay dadka caasimadda ku dhaqda xoolaha, waxaanay ciidammada Asluubta maanta ku wareejisay sagaal neef oo Lo’ ah.
Maayir-ku-xigeenka Hargeysa Mr. Maxamed Cabdillaahi Uur-cadde iyo Taliyaha Ciidanka Asluubta Maxamed Xuseen Xiirane, ayaa xoolahan kula wareegay Xeero-boonta Maxkamadda Degmada Hargeysa u dhaw oo muddo dheer lagu ururin jiray xoolaha laga dhex ururiyo magaalada dhexdeeda.
Xoghayaha Fulinta Dawladda Hoose Mawliid Waris Cabdillaahi oo ka hadlay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay ka ururinta caasimadda Lo’dan iyo sababta ay u wareejinayaan, ayaa waxa uu yidhi; “Runtii shuruudo ayaannu u dhignay dadka ku dhex dhaqda magaalada xoolaha ee ku soo dhex daaya.
Muddadaannu u qabanay iyo shuruudihii aannu ku xidhnay way jebiyeen, dadka xoolaha leh annaga oo tix gelinayna, waxaannu u dignay laba jeer oo aannu warbaahinta uga baahinay in aanay xoolahooda ku soo dayn suuqa, kadibna mar baannu soo ururinay, waanannu u dignay, dabadeedna waxaannu nidhi ha lagu nabo calaamad, saxeexna iyo ganaaaxna ha laga qaado, kadib qofka neefkiisu isaga oo dawladda hoose calaamadisay dib suuqa loogu dhex qabto in aannu wareejino ayaa naga go’an, maantana waxaannu halkan ugu wareejinayna ciidammada Asluubta sagaal neef.”
Mr. Maxamed Cabdillaahi Uur-cadde oo isaguna halkaas ka hadlay, ayaa caddeeyey in waajib tahay in la wareejiyo xoolahaas xoolahan, isaga oo ku eedeeyey dadka magaalada dhexdeeda ku dhex dhaqana xoolaha in ay caaddaysteen arrimahaas.
“Waqtigan caasimadda Hargeysa waxay maraysaa in dadka qaar kood u arko meel Lo’da lagu dhaqdo aad baannu uga xunahay, waana dhaqan xumo aad u liidata oo inagu soo badanaysa, waxaannu u sheegayna in waxa laga hadlaya uu yahay caafimaadkeeda iyo bilicda caasimadda, haddii ay dadkaasi xoolahoodii ilaanshan wayaan, waxaannu si sharciga iyo dawladnimada waafaqsan ugu wareejinaynaa ciidammada Asluubta, haddii ay qalanayaan iyo haddii ay dhaqanayaanba, maanta laga bilaabana waa hanta qaran.”
Taliyaha Ciidanka Asluubta Maxamed Xuseen Xiirane, ayaa isna si weyn u soo dhaweeyey xoolahan lagu wareejiyey waxaannu sheegay inaanay qalitaan kula degdegi dooni, balse ay ku dhaqi doonaan dhul beereedka Ciidammada Asluubtu ay ku leeyihiin galbeedka Gobolka Gabiley.
Tallaabadan ayaa ah markii ugu horraysay ee dawladda hoose hawlgal cad ka qaado xoolaha lagu dhex dhaqo magaalada dhexdeeda oo dadka dhaqdaana aanay digniinaha iyo farriimaha dawladda hoose dheg jalaq u siin jirin.
Previous PostWalxo qarxa oo lagu qabtay Hargeysa Iyo ciidanka qaranka oo ka hadlayNext PostWeftigii Somaliland ee Qaahira ku sugnaa oo ka waramay Wasiirro iyo masuuliyiin ay la kulmeen	Blog